ရော်နယ်ဒို ရောက်လာထဲက ဘရူနို ခြေစွမ်း မပြနိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ အင်ဒီ ကိုးလ် - xyznews.co
ရော်နယ်ဒို ရောက်လာထဲက ဘရူနို ခြေစွမ်း မပြနိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ အင်ဒီ ကိုးလ်
ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အင်ဒီ ကိုးလ်က ရော်နယ်ဒို ရောက်လာခဲ့တဲ့နောက် ဘရူနိုဟာ ခြေစွမ်းငုပ်သွားခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပြီး ကွင်းလယ်လူဟာ မနှစ်တုန်းကနဲ့ တူညီတဲ့ခြေစွမ်းမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကစားသမား မဟုတ််တော့ကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
အသက် 28 နှစ် ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူဟာ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ်ဆီ ရောက်လာခဲ့တဲ့နောက် 2021 အတွင်း ကစားပေးခဲ့တဲ့ ပွဲစဥ် 58 ပွဲမှာ ကိုယ်တိုင် 28 ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး 17 ဂိုး ဖန်တီး ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီထဲက 18 ဂိုး ၊ ဖန်တီးမှု 11 ကြိမ်ကို ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ ပေါ်တူဂီ နိုင်ငံသား ကွင်းလယ်လူဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းအတွက်5ဂိုးမျှသာ သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့သေးပြီး ခြေစွမ်းကောင်းတွေ ပြသနိုင်ဖို့ အတော်လေး ရုန်းကန်နေခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါကို နောက်ပိုင််း ပွဲစဥ်တွေမှာ အထင်သားမြင်ခဲ့ရပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် ယူနိုက်တက်တို့ ဝုလ်ဗ် ကို0– 1 နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဥ်တုန်းက ဘရူနိုဟာ မာတစ်ရဲ့ ဖန်တီးပေးမှုက တဆင့် အပိုင် အခွင့်အရေး တစ်ကြိမ် ရရှိခဲ့ပါသေးတယ် ။ အဲ့တာကိုသာ သူဟာ အဆုံးသတ် သေချာခဲ့ရင် ယူနိုက်တက်တို့ 1 –0နဲ့ ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ကန်ချက်က အံ့ဖွယ်လွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ် ။ အခုတော့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အင်ဒီ ကိုးလ် က ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် ဟာ တစ်နိုင်ငံတည်းသားဖြစ်သူ ရော်နယ်ဒို ရောက်လာခဲ့တဲ့နောက် အရင်လို ခြေစွမ်းမျိုး မပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” သူ့အနေနဲ့ ( ဝုလ်ဗ် နဲ့ ပွဲမှာ ) ရိုးရှင်းစွာပဲ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သင့်ပါတယ် ။ သူဟာ နေရာယူပုံ တကယ်ပဲ မှန်ကန်နေခဲ့ပြီး အသားလေး ထိ ဂိုး သွင်းလိုက်ရုံပဲ လုပ်ခဲ့ရမှာပါ ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ကန်ချက်က ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ဟာသဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ် ”
” ရော်နယ်ဒို ပြန်လာခဲ့တာနဲ့ တပြိုင်နက် ဘရူနိုရဲ့ ပွဲစဥ် တစ်ခုလုံးဟာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပုံပါပဲ ။ ဒီရာသီ ကျွန်တော် သူ့ကို စောင့်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ ရော်နယ်ဒို ပြန်ပြီး ရောက်လာကတည်းက သူဟာ အရင်တုန်းကနဲ့ တူညီတဲ့ ကစားသမားမျိုး မဖြစ်နိုင်ခဲ့တော့ပါဘူး ”
” ခင်ဗျားကတော့ ဒါကို ကြည့်ပြီး ‘ ဒါ ဘာ့ကြောင့်လဲ ? ‘ ဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်ဖြစ်မှာပါ ။ သူ့ဆီမှာ အရည်အသွေးကောင်းတွေ ရှိနေပါတယ် ။ သူ့အနေနဲ့ အသင်းမှာ ရော်နယ်ဒို ရှိနေတယ် ဆိုတာမျိုးကို ခေါင်းထဲမှာ ထည့်တွက်မနေသင့်ပါဘူး ”
” ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့တွေက တူညီတဲ့ အရာကို လိုချင်ကြတဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ကစားသမားတွေမို့လို့ပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ ရော်နယ်ဒို ရောက်လာထဲက သူ့ရဲ့ ပုံစံတွေ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ ” လို့ အင်ဒီ ကိုးလ် က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article ဂွာဒီယိုလာ နေရာ အစားထိုးဖို့ အာဆင်နယ် နည်းပြ အာတီတာ ကို လျာထားတဲ့ မန်စီးတီး အသင်း
Next Article မိုရာတာ အတွက် အပြတ်ပြောလိုက်တဲ့ နည်းပြ ၊ ဘာဆာ အတွက် ကစားလို့ရပြီ ဖြစ်တဲ့ အဲလ်ဗက်စ် တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ